5 lalao-3 hisolo ny Candy Crush Saga vetivety | Androidsis
Ny fametrahana Candy Crush Saga ho mpanapaka tanteraka ny lalao video match-3 ary saika ny lalao rehetra manenika ny Google Play Store dia lalao video io. izay nahazo aingam-panahy maro handefa ny lohany manokana fa misy lohahevitra hafa. Manana fifandimbiasana tsara amin'ny lalao KING isika raha te hiala sasatra kely amin'ny vatomamy sy siramamy be dia be, izay mety hiteraka henatra ary, indray andro any, hitsahatra tsy hitia azy loatra isika noho ny kaloria ananany.
Noho izany antony izany dia handefa lisitry ny lalao dimy aho izay ho an'ny mpankafy Candy Crush Saga dia afaka manampy sasatra mandritra ny fotoana fohy amin'ny manelingelina fa manana vatomamy be dia be izy ireo. Lahatsary video dimy faran'izay avo lenta izay mety hahagaga ny foto-kevitr'izy ireo, ny endriny an-tsary na ny fikarohana antony hafa hahafahanao manolo minitra vitsy an'i Candy Crush Saga izay manimba be eo amin'ny fiainantsika, indrindra satria mila lava eo aloha.
1 Kintana bejeweled
3 Candy hanorotoro Soda Saga
4 Fruits Nibblers
5 Làlana firavaka
Mety ho iray amin'ireo filokana farany matotra indrindra hamongorana an'i Candy Crush Saga amin'ny fanapahany tanteraka. TONGA avy amin'ny franchise malaza be ho an'ity karazana lalao lalao-3 ity sy ny asa tsara ataon'ny ekipan'ny mpamorona azy.
Raha tokony vatomamy be dia be, eto isika manana iray manontolo firavaka maro karazana fa tsy maintsy fantarintsika ny fomba fampitambarana mba hahazoana tombony betsaka amin'ireo ambaratonga rehetra miandry antsika. Izy io dia manana ny iray amin'ireo teboka tsara indrindra amin'ny Candy Crush, ary ity dia ao amin'ny lohahevitra sary sy sary, satria, miaraka amin'ireo tsikombakomba rehetra tratra ireo, dia hahita vokatra be dia be izay hahagaga antsika hanohy hilalao azy io.
Lo mahafinaritra ny haavony sy ny karazany ataovy iray amin'ireo lalao match-3 tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Manana izany maimaim-poana avy amin'ny Play Store ianao.
Alohan'ny taona hihaonanay zava-misy nampitombo hihaza Pokemon Rehefa mandeha eny an-dalambe isika ary miatrika mpilalao hafa amin'ny epic duels, dia manana match-3 afaka manolo izany faniriana izany isika amin'ny fanandramana ny Pokémon Go beta.
En Pokémon Shuffle afaka ianao milahatra Pokémon telo na maromaro mitsangana na mitsivalana, manana ambaratonga maro hilalaovana ianao, afaka misafidy Pokémon ianao ary mamorona ny alehany ao amin'ny piozila hiteraka kôzy ho azy ary misy antsipiriany hafa noho ny paikady hafa mifandraika amin'ny paikady.
Se lavitra ny lalao video mahafinaritra an'i King, fa ho an'ireo mpankafy Pokémon sy ity karazana lalao ity dia tena ilaina izy io, farafaharatsiny mba hanandramana azy.
Tsia, Candy Crush hafa! Eny, saingy amin'ity isika dia miova ho ny vatomamy ho an'ny siramamy ao anaty tavoahangy sasany ny soda. Izay rehetra nahatonga ny lalao voalohany King ho malaza ary izay mampiavaka azy eto dia miverina ny maody lalao samihafa. Azonao atao ny manambatra vatomamy hamely ny ranomandry, milahatra vatomamy bebe kokoa hahazoana ny tantely hamoaka ny Candy Bears ary handatsaka ny soda volomparasy hamonjy ireo vatomamy ireo indray amin'ny endrik'io biby mahatsikaiky nefa mampidi-doza io.
Manana izany takelaka mpitarika, tabilao vaovao ary azonao atao ny mampifandray ireo lalao amin'ny alalàn'ny takelaka sy ny smartphone-nao. Filokana iray hafa mahaliana nataon'i King izay manasarotra ny mpifaninana aminy.
Rovio dia natomboka ity lalao-3 ity tamin'ny taon-dasa tamin'ny fikasana ny fenoy blackberry maro ny fisiantsika, voaroy sy ireo voankazo matsiro izay tsy maintsy atambarantsika am-pahendrena hahazoana isa maro araka izay azo atao.
Ankafizo kalitao teknika tsara hitondrana anay fampisehoana an-tsary izay ifanakalozana ny vokany sy ny feo ka mahatonga fahafinaretana lehibe amin'ny lafiny filalaovana. Rovio dia nanangana lalao fihaonana-3 izay rehefa ela ny ela dia manohy mandray fanamarihana tena tsara avy amin'ny mpilalao maro manerantany.
Haavo maherin'ny 200 Miandry anao izy ireo hizaha toetra ny fahaizanao mahita fitambarana eo amin'ilay tabilao lalao izay misy ny voankazo miakatra eo afovoany. Toy ny hafa dia manana azy io maimaim-poana ianao avy amin'ny Play Store.
Una amin'ireo filokana mahaliana sy manan-tsaina indrindra tamin'ny volana farany ho an'ny lalao-3 izay, fa tsy ny fampifangaroana voankazo na vatomamy, dia tsy maintsy hampifanarahantsika karazan-tany samihafa hamela ny maherifontsika hanohy ny diany hitety ireo tontolo medieval izay miandry azy amin'ity lalao mahafinaritra sy mampiankin-doha ity. antsoina hoe Jewel Road.
Ny lalao Crescent Moon no miandraikitra ento maimaimpoana aty aminay avy amin'ny Play Store hamitahana anay amin'ireo feon-kiran'ny bard sy ireo tontolo tsy maintsy hotadiavintsika. Lalao-3 tany am-boalohany izay tsy maintsy hamerenanao izao tontolo izao miaraka amin'ireo sombin-tany tany am-boalohany ireo. Iray amin'ireo lalao-3 tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
Developer: Lalao crescent Moon
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Lalao video 5 lalao-3 ho an'ny mpankafy te hiala sasatra amin'ny Candy Crush Saga
Google dia mitondra fanampiana Android ofisialy amin'ny Raspberry Pi 3